Ihe kpatara I Ji Kwalite Kaadi Gị Swipe ka EMV | Martech Zone
Mgbe m nọ na IRCE, m bịara ịnọdụ ala na Intuit's SVP of Payments and Commerce Solutions, Eric Dunn. Ọ bụ ihe nlele anya n'ime uto Intuit n'ahịa azụmaahịa na ecommerce. N'ezie, ọtụtụ ndị anaghị aghọta ma ego karịa Intuit karịa PayPal mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị (ọ bụrụ na ị gụnyere ọrụ ha na-akwụ ụgwọ).
Intuit na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike ịbụ ihe njedebe njedebe maka azụmaahịa ma ọ bụ azụmaahịa ọ bụla ebe ndị nwe ha nwere ike inwe nghọta oge na-egosi ego ha. Ihe so na nke a bụ onyinye asọmpi ha maka nhazi ịkwụ ụgwọ. Iji nyere aka ka obere ulo oru bulite onodu e-commerce ha, Ndenye QuickBooks ya na ya BigCommerce.com na Shopify iji kwe ka SMB dị mfe ire n'ịntanetị, na ọnọdụ mkpọsa ha na ebe niile n'etiti.
Mgbanwe na Kaadị E Si Nweta EMV
Companieslọ ọrụ kaadị kredit na-eme mgbanwe mgbawa nyeere kaadị akwụmụgwọ site na October 1st, 2015, nke a maara dịka kaadị EMV. EMV na-anọchi anya Europay, MasterCard na Visa, ndị mmepe nke ọkọlọtọ. Ngbanwe a pụtara na kaadị ndị ahịa gị niile ga-enwe mgbawa agbakwunyere nke a ga-agụ dị iche iche karịa itinye eriri magnet.
Emepụtara teknụzụ EMV iji nyere aka lụsoo ọgụ ọgụ kaadị enwere ike ịkegharị. Ebe ọ bụ na iwebata kaadị EMV-ahịa ya na ahịa ya, aghụghọ ihu kaadị akwụmụgwọ ihu na ihu nwere ama esịn 72%. Enwere ike ịkwụ ụgwọ EMV site na iji mgbawa agbakwunyere ma ọ bụ na-enweghị eriri site na njedebe na-akwado akpaghi aka EMV ịkwụ ụgwọ.
Ihe ị nwere ike ọ gaghị amata bụ na ịgbanwee gaa EMV na-agbanwekwa ụgwọ maka ndị na-ere ahịa na onye ọ bụla ọzọ na-anabata kaadị akwụmụgwọ site na swiper kaadị. Nke a bụ nkọwa si Intuit:
Ị nwere ike gụkwuo gbasara EMV na ihe kpatara ị ga-eji na-eme atụmatụ ịkwaga ndị ọhụrụ a na-agụ na Intuit saịtị. N'ihe banyere ngbanwe nke EMV, Intuit QuickBooks na-ahapụkwa a ọhụrụ EMV agụ. Emere kaadị EMV ka etinyere ya na onye na-agụ ya wee nọrọ ebe niile na azụmaahịa ahụ niile.
Obere Ntanetị nke Teknụzụ EMV
Intuit nyochara obere ndị ọchụnta ego ka ha nweta echiche ha na teknụzụ EMV na ọrụ nkwụsị na-abịa:
42% nke ndị ọchụnta azụmaahịa anụbeghị banyere oge mgbanwe EMV.
58% nke obere azụmaahịa nwere azụmaahịa azụmaahịa dị elu mgbe ndị ahịa jiri kaadi kaadị akwụ ụgwọ.
57% nke ndị zaghachirinụ kwupụtara ọnụ ahịa nke ọnụ ọgụgụ ọhụrụ ma ọ bụ onye na-agụ ya dị ka isi ihe mere na-egbochi ha ịhazi ma ọ bụ ịkwalite ihe ngwọta EMV dakọtara.
85% nke ndị nwere obere azụmaahịa na-agaghị akwaga, ma ọ bụ ndị a na-ekpebi, amataghị ụgwọ ego na iwu ha ga-ahụ maka mbido Ọktọba.
86% nke ndị nwere obere azụmaahịa na-agaghị akwaga, ma ọ bụ ndị amabeghị mkpebi, agaghị enwe ike ijikwa ụgwọ ego na iwu nke kaadị kaadị aghụghọ.
Tags: azịza azụmahịakaadịkaadị akwụmụgwọ swiperkaadị akwụmụgwọEmvEmv na-agụeric dunneuropayintuitirceMasterCardịkwụ ụgwọsmart ibevisa